भागरथीको हत्याका आरोपित भट्टलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप Global TV Nepal
ग्लोवल टि.भी. बुधबार, फाल्गुन १२, २०७७ 0
काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न आरोपितलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप भएको छ । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न आरोपी दिनेश भट्टलाई प्रहरीले मंगलबार अदालतमा हाजिर गराएको थियो ।
अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न दिएको ५ दिनको म्याद सकिएपछि थप गर्न अदालत लगिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीका अनुसार भट्टविरुद्ध अनुसन्धानका लागि थप ५ दिन म्याद अदालतले दिएको छ । हाल प्रहरीले घटनामा भट्टको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने थप आधारहरु खोज्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भट्टलाई घटनास्थल आसपास देख्नेहरुको कागजी बयानदेखि फरेन्सिक जाँच पनि जारी छ । भागरथीको भजाइनल स्वाब प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ । उनको मोबाइलको समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण भइरहेको छ ।
विद्यालयबाट २१ माघमा घर नफर्किएपछि भट्टको खोजी सुरु भएको थियो । भोलिपल्ट उनको शव सडकबाट ३० मिटर पर झाडीमा भेटिएको थियो ।
प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित
आजबाट तीन दिन मनसुन थप सक्रिय
पटक पटक राज्य कोषको दोहन कति हुन्छ ?
एक महिलाको पेटमा १३ वटा बच्चा
४४.५६ प्रतिशतले घट्यो नेप्से
स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका मोहनबहादुर भन्छन् : माओवादी केन्द्रमै छु
कमल थापाकी छोरी प्रतिष्ठाले त्यागिन् राप्रपा
कोटेश्वरमा माधव –प्रचण्ड भेटवार्ता
एमसीसीमा के भैरहेको छ?
प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दै